पैसामा न्याय बिक्री हुन्छ भनेर सय पटक होइन हजार पटक भनिन्छ,र लाखसम्म पटक भन्न छोडिदैन: सिधाकुरा जनतासँग भिडियो – पुरा पढ्नुहोस्……
पैसामा न्याय बिक्री हुन्छ भनेर सय पटक होइन हजार पटक भनिन्छ,र लाखसम्म पटक भन्न छोडिदैन: सिधाकुरा जनतासँग भिडियो
आफ्नै जन्म मिती र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवादले थला परेका न्यायलयले लाखौँ सर्वसाधारणलाई न्याय देला भनेर के आशा गर्नु ! मुलुकको न्यायलयको यति उपहास भयो कि चोक चोकका भट्टी पसलमा खोयाबिर्के खानेहरुको समेत सितन बन्यो प्रधानन्याधीश काण्ड । देशको न्यायलयको विवाद सदनमा हुनु पर्नेमा सडकमा हुनपुग्यो । आफ्ना आफ्ना स्वाद अनुसार न्यायलयको अझ भनौ प्रधानन्याधीशको व्याख्यामा मानिसहरु र संघ संस्थाहरु ज्यान फालेर लागे । नयाँ नयाँ जन्ममितिहरु सँगै नयाँ नयाँ तथ्य र तर्कहरुले बजार ताते ।
न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायधीशलाई किक आउट शैलीमा निलम्बीत ग¥यो । टेलिभिजनको पर्दामा एकै पटक २ वटा ब्रेकीङ न्युज चल्यो । नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको शपथग्रहण गराई रहँदा सपथ खुवाउने प्रधानन्यायधीशनै निलम्बीत भएको खबर आयो । निलम्बीत प्रधानन्याधीश बाट खुवाइएको सपथ जुठो भएको तर्क सर्वत्र चल्यो । अन्ततः प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको राजीनामा नै आयो । न्याय क्षेत्रले इतिहासमै सर्वाधिक बिवादको सामना गर्नु प¥यो ।
आखिर राजनीतिक भागबण्डाबाट न्यायमुर्ती छान्नुको कलबिषको तितो सबैले चाखे । फलस्वरुप सम्मानको उच्च स्थानमा हुनुपर्ने देशको न्यायलय बिवादको निचो र होचो सतहमा पछारियो । प्रधानन्याधीश वा न्यायाधीशहरु आँफु निकट भैदिए फाइदै फाइदा देख्नेहरुको हुलले न्यायालय दलालहरुको जुवा अड्डा भएको छ । पैसामा न्याय बिक्री हुन्छ भनेर सय पटक भनि सकियो, हजार पटक भनिन्छ र अर्को लाख पटक भन्न छोडिदैन ।
स्वार्थीहरुको जालमा न्यायलय नफसेको भए मुलुकमा त्यती ठुलो कर छली सम्भव थिएन । जनताको आस्था न्यायलय प्रति डगमगाएको मात्र छैन गल्र्याम गुर्लुङ ढलेको छ । जीवन भर न्यायको भिख मागेर अनुहारमा असिवटा मुजा परेकाहरुको आँखामा आँखा जुधाएर हेर्ने न्यायाधीशहरु कहाँ भेटीएलान् ? २/४ कालाकोटेहरुले स्यालले र्झै विठ्याइ गरेर भगवानलाई समेत थाहा नहुने गरी न्यायधीश किनिदिन्छन् ।
पैसा हुनेले हत्तपत्त केश हार्नै पर्दैन । हुन त पक्ष र विपक्षका वकिलहरु नै कुरा मिलाएर चियर्स गर्ने भैसकेपछि सारा दोष न्यायललाई जाँदैन तर विचौलियामुक्त न्यायलयको कल्पना गर्न सक्ने हैशियत हाम्रा न्यायलयहरुले राखेको दिन कुनै फटाहा कालो कोेटेले गरीबको घरखेत खाइदिन पाउँदैनथ्यो । आफ्नै जन्म मिती, शैक्षिक प्रमाणपत्र र चारीत्रिक प्रमाणपत्रको विवादले थला परेको न्यायलयले लाखौँ सर्वसाधारणलाई समय मै न्याय देला भनेर आशा गर्नु आँफै प्रती अन्याय हुन जान्छ ।
आफुसंग बिहे गर्न नमानेपछि यसरी तातो तेल खनायो, घुस लिनु सामान्य हो भन्छन् बिरगञ्जका प्रहरी ! हेर्नुहोस भिडियो सहित .
Nextविश्वभरबाट नेपाली टिमलाई बधाईको ओइरो, आईसीसी हुँदै माइकल क्लार्कदेखि यि चर्चित स्टारहरुले यसो भने…..
हाँस्य टेलिश्रृंखला “मेरी बास्सै” को आजको ५६६ औं भाग यस्तो छ,हेर्नुहोस् (भिडियो)
पत्रकार रबि लामिछानेलाई ठाडो चेतावनी दिदै दिल निशानिले यस्तो भनेपछी ,-हेर्नुहोस (भिडियो सहित)